कसरी उच्च गुणवत्ताको ब्याकलिङ्क सूची बजार आला अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने?
प्रत्येक परिप्रेक्ष्य र स्मार्ट अनलाइन व्यापारीहरू वेबसाइटको रैंक सुधार गर्न र अनलाइन व्यापार राजस्व बढाउनको लागि उच्च-गुणस्तर ब्याकलिङ्क सूचीहरूको खोजी गर्दैछन्।. तपाईंको साइटमा लिंक रस प्राप्त गर्न विभिन्न तरिकाहरू छन्. यद्यपि, तिनीहरू सबैले विश्वसनीय र व्यावहारिक लागेनन्. आज हामी तपाइँसँग लिङ्क इमारतका लागि उत्तम स्रोतहरू केहि साझा गर्न जाँदैछौं - pc grain. यो मार्गदर्शक पछ्याएर, तपाईं उच्च गुणस्तरको ब्याकलिङ्क सूची सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र खोज इन्जिनहरूको आँखामा आफ्नो प्राधिकरण बढाउनुहुनेछ।.
उच्च गुणस्तरको ब्याकलिङ्क सूची प्राप्त गर्ने तरिका
सबै वेबसाइट मालिकहरू यो हो कि होइन सानो व्यवसाय वा ठूलो व्यापारिक प्लेटफार्म जस्तै कि तपाईंको ग्राहकको प्रशंसापत्र देखाउन को लागी यो ब्रान्ड प्रतिष्ठा बढाउन एकदम सही तरिका हो र नयाँ साइट आगन्तुकहरुलाई मद्दत गर्न एक सही खरीद निर्णय गर्न को लागी एकदम सही तरीका हो।. यही कारण हो यदि तपाईं एक उत्पादन वा सेवा प्रयोग गरी पूर्णतया सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, यसको लागि प्रशंसा पठाउन विचार गर्नुहोस्. तपाईलाई वास्तविक ग्राहकको रूपमा प्रमाणित गर्न, अनलाइन पसलहरू र वेबसाइटहरूले प्राय: तपाईंको साइटमा ब्याकलिंक राख्नुभएमा तपाईले उनीहरूको बारेमा सोध्न बिना.
त्यसैले एक प्रकारको रूपमा तपाईले केही प्रामाणिक वेब स्रोतहरूको ग्राहक बन्न सक्नुहुनेछ जुन तिनीहरूबाट केही प्रशंसा लिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्दछ।.
नयाँ लिङ्क निर्माणका अवसरहरू उत्कृष्ट ब्लगहरूबाट हेर्नुहोस्
स्प्यामी लिंक इमारत प्रविधि इतिहासमा लुगा लगाइरहेका छन्।. आजकल, उच्च गुणस्तर ब्याकलिंक सूची सिर्जना गर्न, तपाइँलाई गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न ईमेल आउटरीच प्रयोग गर्न आवश्यक छ. सबैभन्दा पहिला, तपाईंले सही मान्छेलाई पुग्नको लागि खोज्न आवश्यक छ. यो गर्न सरल तरीका उत्तम ब्लग पोष्टहरूको सूची पत्ता लगाउने हो. यस्तो सूचिहरूमा, तपाईं आफ्नो सम्भावित व्यवसाय साझेदारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ. उत्तम साझेदारहरू फेला पार्नका लागि, तपाइँ केवल Google खोजी बक्समा निम्न प्रश्नहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुनेछ - "उत्तम (तपाईंको विषय) वर्षका ब्लगहरू," "मेरा मनपर्ने (तपाईंको विषय) ब्लगहरू," "तपाइँको विषयको शीर्षक". "यी ब्लगहरू पुग्नुहोस् र तपाईंको प्रासंगिक ब्याकलिङ्कहरू बाहिर जानुहोस्.
ब्लगर समीक्षाहरूले तपाईंको व्यापार प्रचारको लागि एक मान ल्याउन सक्छ।. यदि तपाईंले केहि गुणस्तरहरू र मानिसहरूको लागि मूल्यवान बेचन गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सजिलैसँग उच्च गुणवत्ताको ब्याकलिङ्कको ह्यान्डबलमा बदल्न सक्नुहुनेछ. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुराले तपाईंको उत्पादन वा निःशुल्क सेवाको साथ तपाईंको बजार आला दिमाग प्रभावकारी प्रदान गर्दछ. तिनीहरूले तपाईंको उत्पादनमा पाठ्यपुस्तक वा दृश्य फाराममा गुणस्तर समीक्षा सिर्जना गर्नेछ र यसलाई आफ्ना अनुयायीहरूसँग साझा गर्नेछ, नयाँ सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाइँको साइटमा निर्देशन दिँदै।.
लिङ्क अपहरू वा दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक ब्ल्याक पोष्टहरू जुन बकाया सामग्रीसँग लिङ्क गर्नुहोस्. तपाईले आफ्नो बजार आविष्कारमा लिंक राउन्डअपहरू खोज्न सक्नुहुनेछ Google खोजी बक्समा निम्न प्रश्नहरू - "तपाईंको कुञ्जीपाटी" + "लिंक राउन्ड अप"; "तपाईंको कुञ्जीशब्द" + राउन्ड अप; "तपाईंको कुञ्जीशब्द" + "सबै भन्दा राम्रो," र यति र त्यसो त. अर्को चरणमा, तपाईंको सामग्री राउन्डअपहरूको लागि उपयुक्त मध्ये एक व्यक्ति चलाउन तपाईंको सामग्री जूता गर्दछ.